မြန်မာပြည်အတွက် လိုအပ်နေတဲ့ တရားသူကြီး | Monywa Gazette
Home ရုပ်ရှင်ခံစားမှု မြန်မာပြည်အတွက် လိုအပ်နေတဲ့ တရားသူကြီး
မြန်မာပြည်အတွက် လိုအပ်နေတဲ့ တရားသူကြီး
၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၆ ရက်၊ အိန္ဒိယရဲ့ ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံကြီးတစ်ခုပေါ်မှာ အက်ဘ်ဒူးဆိုတဲ့ လူငယ်လေးတစ်ယောက် ဗုံးပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ရလာတဲ့ဒဏ်ရာတွေနဲ့ ညည်းညူလဲလျောင်းနေတယ်။ လူနာကုတင်ဘေးမှာ အက်ဘ်ဒူးရဲ့မိခင်ကြီးဟာ စိုးရိမ်တကြီး ပူပန်စောင့်ကြည့်နေတယ်။ သူ့သားလေးဟာ တော်တော်လေး ကောင်းနေရာကနေ သူနာပြုထိုးပေးလိုက်တဲ့ ဆေးတစ်လုံးကြောင့် အခြေအနေဆိုးသွားတယ်။ အရေးပေါ် ခန်းထဲကို ရွှေ့လိုက်ရတယ်။ ဆေးရုံပိုင်ရှင်ဒေါက်တာက သူလုံးဝသက်သာသွားမှာပါ၊ ဘုရားက ကယ်တင်ပေးမှာလို့ ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင် နှစ်သိမ့်ပေးပါတယ်။ အက်ဘ်ဒူးသေသွားပါတယ်။
ဗုံးပေါက်ကွဲမှုကြောင့် သေတာမဟုတ်ဘူး။ ဆေးရုံပိုင်ရှင်ဒေါက်တာ သတ်လိုက်လို့သေတာပါ။
ဘာ့ကြောင့်သတ်ရတာလဲ….ဗုံးပေါက်ကွဲမှု တရားခံပေါ်မှာစိုးလို့ တစ်စုံတစ်ယောက်က ငွေပေးပြီး သတ်ခိုင်းတာပါ။ ဆေးရုံပိုင်ရှင် ဒေါက်တာဟာ လူနာရှင်ဆီကလည်း ငွေယူတယ်။ သတ်ခိုင်းတဲ့လူဆီကလည်း ငွေယူတယ်။ အက်ဘ်ဒူးရဲ့မိခင်ကြီးဟာ ချစ်ရတဲ့သား ဆုံးပါးတာကို မကျေနပ်လို့ ဆေးရုံပိုင်ရှင်ဒေါက်တာတွေကို တရားစွဲပါတယ်။ တရားသူကြီးက လာဘ်မစားဘဲ မျှမျှတတဆုံးဖြတ်တတ်လို့ ကျော်ကြားပါတယ်။ ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့သူပါ။ တရားသူကြီးရဲ့နာမည်က မစ္စတာတာဂိတဲ့။ လုပ်သက်ပြည့်လို့ မကြာခင် အငြိမ်းစားယူတော့မှာပါ။
တရားခွင်မှာ ဆေးရုံပိုင်ရှင်ဒေါက်တာ လင်မယားဟာ စာရွက်စာတမ်းအတုတွေနဲ့ သေသေချာချာ ပြင်ဆင်လာပါတယ်။ အက်ဘ်ဒူးရဲ့ မိခင်ကြီးကတော့ သားအတွက် တရားမျှတမှုလိုချင်လို့သာ တရားရုံးကိုလာခဲ့တာပါ။ ဒေါက်တာတို့ ပေါ့ဆလို့သေတယ်ဆိုတာ ပြသဖို့ လုံလောက်တဲ့ အထောက်အထားတွေ မရှာဖွေနိုင်ခဲ့ဘူး။ နှစ်ဖက် ရှေ့နေတွေ အပြန်အလှန် လျှောက်လဲပြီးတဲ့အခါမှာ တရားသူကြီး မစ္စတာတာဂိဟာ ဒေါက်တာ လင်မယားကို အပြစ်မရှိဘူးဆိုပြီး တရားသေ လွှတ်လိုက်ပါတယ်။
အမှန်တရားက ရှုံးသွားပါတယ်။ မစ္စတာ တာဂိရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာလည်း ရှုံးပါတယ်။ တရားရုံးကအထွက်မှာ အက်ဘ်ဒူးရဲ့မိခင်က ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ရောင်းစားတယ်ဆိုပြီး ပါးရိုက်တာကိုလည်း မစ္စတာတာဂိ ခံရပါတယ်။ ကဲ…မစ္စတာတာဂိ ဘာလုပ်မလဲ…။
ဟိုတယ်ပိုင်ရှင် ပန်ဂျဆင်း။ ကောက်ကျစ်တဲ့ စီးပွားရေးသမား။ ငွေရဖို့အတွက်ဆို ဘာမဆို လုပ်တဲ့သူ။ တစ်နေ့တော့ သူပိုင်တဲ့ဟိုတယ်ကို ညားခါစစုံတွဲတစ်တွဲ ဟန်းနီးမွန်းထွက်လာတယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ အဲဒီစုံတွဲက အဲဒီဒေသက နာမည်ကြီး နိုင်ငံရေးသမားနဲ့ မတည့်တဲ့လူရဲ့ သမီးနဲ့ သမက်။
သူ့သူငယ်ချင်းရဲ့သမီးဆိုလည်း ဟုတ်တယ်။ နိုင်ငံရေးသမားနဲ့ မစ္စတာပန်ဂျဆင်း ပေါင်းပြီး ယုတ်မာတဲ့အမှုတစ်ခု ဆောင်ရွက်ကြတယ်။ စုံတွဲတည်းတဲ့အခန်းထဲမှာ လျှို့ဝှက်ကင်မရာ တပ်ဆင်ပြီး ဗွီဒီယိုရိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ လိုင်းပေါ်ဖြန့်ပါတယ်။ သူတို့ဘာသာ သူတို့ ရိုက်ကူးပြီး တင်တယ်ဆိုပြီး ကပ်ရှင်တပ်ပါတယ်။ ကောင်လေးနဲ့ကောင်မလေးက မသိဘူးပေါ့။ မိုးမမြင်လေမမြင် ပျော်ကောင်းနေကြတုန်းပါ။ ကောင်လေးနဲ့ကောင်မလေးကို ရဲကလာဖမ်းပြီး တရားစွဲပါတယ်။ တရားခွင်မှာ ဟိုတယ်ပိုင်ရှင် မစ္စတာပန်ဂျဆင်းဟာ စာရွက်စာတမ်းအတုတွေ ဖန်တီးပြီး ဒီစုံတွဲဟာ သူ့ဟိုတယ်မှာ မတည်းကြောင်း တရားရုံးမှာ ထွက်ဆိုပါတယ်။ တရားသူကြီး မစ္စတာတာဂိဟာ တရားမဆုံးဖြတ်နိုင်သေးခင် ကောင်လေးနဲ့ကောင်မလေးရော ဟိုတယ်ပိုင်ရှင် မစ္စတာပန်ဂျဆင်းကိုရော နိုင်ငံတော်ရိပ်သာတစ်ခုမှာ ထိန်းသိမ်းထားပါတယ်။
ထိန်းသိမ်းထားတုန်း ကောင်မလေးက ရှက်လွန်းလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတ်သေသွားပါတယ်။ သက်သေမခိုင်လုံတဲ့အတွက် မစ္စတာပန်ဂျဆင်းတစ်ယောက် အာမခံရပါတယ်။
ဒီအမှုမှာလည်း အဓမ္မဘက်တော်သားတွေ အနိုင်ရပါတယ်။ တရားမျှတမှုကတော့ ….. ရှုံးသွားပါတယ်။
တရားသူကြီး မစ္စတာတာဂိတစ်ယောက်လည်း အငြိမ်းစားယူလိုက်ပါပြီ။ သူ့ရဲ့တရားသူကြီးသက်တမ်းကို အရှုံးနဲ့ ပိတ်လိုက်ရသလိုပါပဲ။ အငြိမ်းစားယူပြီးလို့ မကြာခင်မှာပဲ မစ္စတာတာဂိရဲ့သမီး မင်္ဂလာဆောင် ကျင်းပပါတယ်။ မြို့ရဲ့ သူဌေးသူကြွယ်တွေ မင်းစိုးရာဇာတေွအကုန် လာကြပါတယ်။ သူ့တရားရုံးမှာ အမှုရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ ဒေါက်တာစုံတွဲရော၊ ဟိုတယ်ပိုင်ရှင် မစ္စတာပန်ဂျဆင်းရော လာကြပါတယ်။ မင်္ဂလာဆောင်ညစာစားပွဲကျင်းပအပြီးမှာ ဒေါက်တာစုံတွဲ အိမ်ပြန်ရောက်မလာပါဘူး။ ဘယ်ဆီဘယ်ဝယ်ရောက်သွားမှန်းမသိကြဘူး။ သတင်းတွေမှာ အုတ်အော်သောင်းနင်းဖြစ်ကုန်ပါတယ်။ မကြာခင်မှာ ဟိုတယ်ပိုင်ရှင် မစ္စတာပန်ဂျ ဆင်းတစ်ယောက်လည်း ကိုးကတားကို ခရီးထွက်ရာကနေ အပြန်ရထားပေါ်မှာ ပျောက်သွားပြန်ပါတယ်။ မြို့ရဲ့နာမည်ကြီးတွေဆိုတော့ လူအများ စိတ်ဝင်စားကြပါတယ်။ သတင်းတွေကလည်း အမျိုးမျိုးရေးကြပါတယ်။ ရဲတပ်ဖွဲ့လည်း အလုပ်ရှုပ်ကုန်ပါတယ်။ နယ်မြေခံရဲအရာရှိ မစ္စတာ ရှားမားကို အားမရလို့ ပြစ်မှုဌာနခွဲက အထူးအရာရှိ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပါ ရောက်လာပါတယ်။ နာမည်က ရာတီတဲ့။
အမျိုးသမီးဆိုပြီး အထင်မသေးလေနဲ့။ တရားခံတွေကို တစ်ယောက်တည်း ရဲရဲရင့်ရင့် ဖမ်းလာ တဲ့သူ ဖြစ်တယ်။ လက်စောင်းက ထက်သလား မမေးနဲ့။ သူမနဲ့တွေ့ရင် လူဆိုးတွေ အလဲလဲ အကွဲကွဲပဲ။ အားသာချက်က အမျိုးသမီးပီပီ စေ့စပ်တယ်။ ထက်မြက်တယ်။ နည်းလမ်းအမျိုးမျိုး ရှာပြီး တရားခံတွေ ဖော်ထုတ်တတ်တာပါပဲ။
အမျိုးသမီးရဲအရာရှိ မစ္စရာတီဟာ ဒီအမှုနှစ်ခုကို အသေးစိတ် ပြန်လည်လေ့လာပါတယ်။ စစ်မေးစရာရှိတဲ့လူတွေကို သွားရောက်စစ်ဆေးမေးမြန်းပါတယ်။ ဟိုတယ်ရဲ့အခန်းထဲကိုလည်း သွားရောက်စစ်ဆေးတဲ့အခါ လျှို့ဝှက်ကင်မရာတပ်ဆင်ထားတာကို တွေ့သွားပါတယ်။
တစ်ဆင့်ချင်း လိုက်လံစစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါ ဟိုတယ်ပိုင်ရှင် မစ္စတာပန်ဂျဆင်းက ရူပီးငါးသောင်းပေးပြီး ကင်မရာတပ်ဆင်ခိုင်းတာကို သိလိုက်ရတယ်။
မစ္စရာတီတို့ လူပျောက်အမှုနှစ်ခုကို အသည်းအသန်လိုက်နေတုန်းမှာပဲ ဒီလားဝါးဆိုတဲ့ လူတစ်ယောက် ပျောက်သွားပြန်ပါတယ်။ ဒီလူကလည်း လူကောင်းမဟုတ်ဘူး။ အသီးရွက်ဈေးမှာ ဗုံးထောင်ဖို့ စီစဉ်ခဲ့တဲ့သူပါ။ ဖြစ်စဉ်(၁)မှာပါတဲ့ အက်ဘ်ဒူးကို နှုတ်ပိတ်ခဲ့တာလည်း သူပဲ။
ဟုတ်ကဲ့….သူ့ကိုဖမ်းသွားတာ ဘယ်သူလဲ….အခြားသူမဟုတ်ပါဘူး။ အငြိမ်းစားယူသွားတဲ့ တရားသူကြီး မစ္စတာ တာဂိပါပဲ။
အံ့သြစရာပါပဲ။ တစ်သက်လုံး တရားဥပဒေ ဘောင်အတွင်းမှာနေခဲ့တဲ့သူဟာ တရားဥပဒေတွေကို အားရတော့ဟန်မတူပါဘူး။ တရားဥပဒေဟာ တရားမျှတမှုကို လုံလောက်အောင် ဆောင်ကြဉ်းမပေးနိုင်ဘူးလို့ သူခံစားရဟန်တူတယ်။ အငြိမ်းစားယူပြီးတဲ့အခါမှာ အပြစ်ရှိပေမယ့် တရားဥပဒေ က အပြစ်မပေးလိုက်နိုင်တဲ့သူတွေကို သူ့နည်းသူ့ဟန်နဲ့ ဖမ်းဆီးအပြစ်ပေးပါတော့တယ်။
သူတို့အပြစ်တွေကို ဝန်ခံခိုင်းပါတယ်။ ဒါကို ဗီဒီယိုရိုက်ကူးထားပါတယ်။ ဒီအလုပ်တွေကို လုပ်တာ မစ္စတာတာဂိတစ်ယောက်တည်း မဟုတ်ပါဘူး။ သူ့ကို အဓိကကူညီပေးနေတာက ရဲအရာရှိ မစ္စတာရှားမားပါ။ သူတို့နှစ်ဦးပေါင်းပြီး လုပ်ဆောင် နေတာပါ။
ပြန်ပေးဆွဲမှုတွေကို ကျူးလွန်နေတာက သာမန်အရပ်သားတွေ မဟုတ်ဘူး။ တစ်ယောက်က အငြိမ်းစား တရားသူကြီး။ တစ်ယောက်က အမှုထမ်းဆောင်နေဆဲ ရဲအရာရှိ။ တကယ်ကို သပ်သပ်ရပ်ရပ် စနစ်တကျ လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့သူတွေ။ ဒါကို နောက်မှရောက်လာတဲ့ ထက်မြက်တဲ့ရဲအရာရှိ အမျိုးသမီးမစ္စရာတီ ဖော်ထုတ်နိုင်ပါ့မလား။
ဟိုနှစ်ယောက်ရဲ့ ဉာဏ်အစွမ်းတွေကို သူမ ယှဉ်နိုင်ပါ့မလား…။ နောက်ထပ် ဘယ်သူတွေရော ပြန်ပေးအဆွဲခံရသေးသလဲ။
ဗစ်တိုးရီးယားလေးအတွက် ခေါ်ချင်မိ ဒီဇာတ်ကားကြည့်ရတော့ မြန်မာပြည်မှာလည်း ဒီလို တရားသူကြီးနဲ့ရဲအရာရှိမျိုး လိုချင်မိသား။ စိတ်ကူးယဉ်မိတယ် ဆိုပါတော့။ အခြားအမှုတွေအတွက် မဟုတ်ဘူး။ နေပြည်တော်က ဗစ်တိုးရီးယားလေးအတွက် အကူအညီတောင်းချင်မိပါတယ်။ သိကြတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ ဗစ်တိုးရီးယားလေးအမှုဟာ တရားဥပဒေလမ်းကြောင်းအတိုင်းက လမ်းဆုံးသလောက်ရှိနေပါတယ်။ မဆီမဆိုင် ဒရိုင်ဘာအောင်ကြီးကို ထိုးထည့်ပြီး အမှုကိုရှုပ်အောင်လုပ်…. နောက်ဆုံး အောင်ကြီးမှာအပြစ်မရှိဆိုပြီး လွှတ်ပေး…. ဘယ်သူ့ကို ဆက်တရားစွဲရမှန်းမသိအောင် လုပ်ထည့်လိုက်တဲ့အကွက်လေးတွေ။ ဗစ်တိုးရီးယားလေးအတွက်ကတော့ ဒီတရားသူကြီးမှပဲ တရားမျှတမှုတွေ ယူဆောင်လာနိုင်မယ်ထင်ပါရဲ့။
သြော်…. ဇာတ်ကားရဲ့နာမည်က One Day: Justice Delivered ပါ။
Previous articleမုံရွာ ရေလှိုင်းတုကစားကွင်းတွင် လူသေမှု စတင်စုံစမ်း
Next articleဒေါက်တာမြင့်မြင့်သိန်းနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း